Igumbi lakho lokulala e i-resort sinombuki zindwendwe onguAngela
I-Idyllic Qamea Island- emantla nje eSiqithi saseTaveuni yenye yezona ndawo zintle kunye nezingonakaliswanga iindawo zokuhamba eFiji. Ukuhlala eMaqai Eco Resort kukuvumela ukuba uphume kwigridi kwaye ubuyele kwindalo. Uzakuhlala kwindawo esecaleni kolwandle- izinyuko eziya elwandle. Chitha iintsuku zakho uhamba nge-snorkeling, usefa, ukuloba, ukukhwela intaba, ukutolika okanye ukuphumla kwi-hammock!
Pakisha iibhegi zakho kunye ne-sunscreen siya kudibana nawe kwisikhululo seenqwelomoya saseTaveuni (intlawulo eyongezelelweyo) kwaye sikuse kwiparadesi efihlakeleyo yesiqithi.
Ijikelezwe ziindawo zokuchithela iinkwenkwezi ezi-5 kunye ne-7 kwiSiqithi saseQamea, fumanisa ukuba i-glamping eMaqai eco Resort. Igumbi lakho labucala (ikhabhinethi ephambi kolwandle) lixhotyiswe ngegumbi lokuhlambela le-en-suite, ifeni, izibane, iibhedi ezitofotofo ezinxibe iilinen zebhedi ezisemgangathweni, iwadilophu kunye neveranda enkulu enendawo yokuhlala yangaphandle.
Hlala emva kwaye uphumle indawo yokuphumla inendawo yokutyela kunye nebar.
Isicwangciso sokutya sinyanzelekile xa uhlala kwindawo ekuchithelwa kuyo iiholide kwaye uhlawulwa xa ufika.
AUD 89 ngosuku umntu omdala
AUD 60 kubantwana 4- 12 iminyaka
Nceda uqaphele ngenxa yendawo yee-bures ezikufutshane namanzi asibamkeli abantwana abangaphantsi kweminyaka emi-4
Ugcino lwemihla ngemihla
Ukusetyenziswa kwasimahla kwezixhobo ze-snorkel kunye ne-kayaks.
Umsitho weKava yesiNtu
Ukunyuka kwehlathi okukhokelwayo
Ubusuku be-Bonfire kunye neziginci
Umboniso wokuvula ikhokhonathi
Umphathi wethu weholide kunye neqela baya kukukhathalela kakhulu.